Iimbono zokubhiyozela i-francaise
I-Francophiles, nayiphi na ixesha lixesha elifanelekileyo lokubhiyozela isiFrentshi, kodwa kukho iholide enye ngokukhalela i-party-themed party: i- Bastille Day . Nazi ezinye iimbono zeqela elinomnye u-French paneche.
Ukuba uhamba ngemibala yemihla yaseRoma yaseBastille, amaMelika anokulula: unokuphinda usebenzise kwakhona umbala obomvu, omhlophe, kunye nohlaza okwesibhakabhaka ukusuka ngomhla we-4 kaJulayi. Unokucinga kwakhona ngokutshala imali kwezinye iipowusta, okanye wenze ngokwakho ngokukhupha iifoto zakho ezizithandayo zaseFransi.
Ukuba uvakalelwa ubugcisa okanye udlala, khaza ikhadi yendawo eneemidwebo ezincinane ze-Eiffel Tower, okanye wenze i-berets encinci okanye iiflegi zeFransi njengento ekhethayo.
Ukufumana abantu kwingqondo yokuxoxa, qwalasela enye yeengcamango zezihloko:
Iingcaphuno zesiFrentshi - zinikezela ambalwa amagama akho ayintandokazi aseFrancophone ukuxoxa.
- Namhlanje kwiimbali zeFrench - thetha ngabantu abadumile baseFransi ababelana ngemini yokuzalwa nganye.
Iindaba ezihambahambayo - nabani na oye eFransi baya kuba nomdla wokuthetha ngawo. Setha iprojekti ukutshintsha iibali nezithombe.
- Inkcubeko yesiFrentshi - akukho nqoqo yeengxoxo zengxoxo xa kuziwa kumafilimu aseFransi, imidlalo, iincwadi ...
- isiFrentshi ibhetele kune ... yonke into - ndiyibeka ndawonye nje ukuzonwabisa; ubone ukuba unako ukongeza kwizintlu zam, okanye ufike ngeendlela ezintsha.
- iSpanishi kulula ngakumbi kuneFrench - inyaniso okanye inyaniso?
Ungakulibali ukuba nomculo omnandi waseFransi odlala ngasemva, okanye nakwi-movie.
Akukho nto ithi isidlo esifana nokutya okunesidlo saseFransi neziphuzo. Ezinye ukutya zakudala zi-cheese, i-crêpes, i-fondue, isobho se-anyanisi sase-French, i-pâté, i-pissaladière, i-quiche, i-ratatouille, i-croissants, kunye neentlobo zezonka zesiFrentshi . I-dessert, zama i-chocolate-mousse, ne-crème brûlée. Ngokuphathelele iziyobisi, iwayini , i-champagne, i-pastis, i-chartreuse, ikhofi kunye ne-Orangina.
Yiba nomdla wokutya !
Treueschwur der USA: Isibambiso sase-United States sokuxhaswa ngesiJamani
Iikhompyutha ze-TOEFL zeeFundo zeeFree Free
Ibali elimnandi kunye neengoma ze 'Noel yokuqala' ngesiFrentshi
Iindlela ezili-10 zokuphucula iSpeyin yakho ngo-2018
Indlela yokunciphisa uxinzelelo lwezezimali kwiKholeji
Ngo-2019 iBritish Ivulekile: I-Championship enkulu e-Ireland
I-Callaway ye-Great Big Bertha II 415 Umqhubi
Isatifiketi se-Thirteen Thirds Colonies
I-Albhamu ephezulu ye-5 Elvis
Indlela yokunciphisa amagama abonisa ukubonakalisa isiLatini: i-Hic, i-Ille, iste, i-Is
I-'80s Music Artists kusukela e-Australia naseNew Zealand
Ngaba amaKatolika kufuneka agcine umlotha wawo kuwo wonke usuku ngo-Ash ngoLwesithathu?
Imfazwe Yehlabathi II: Imfazwe yaseGuam (ngo-1944)
Yintoni Ebonisa Ukuxhomekeka Kwemodeli?
Iimvo ezi-15 malunga nokuba yiBust Famous Bust
Isicelo sikaYakobi noYohane kuYesu (Marko 10: 35-45)